Ny famatsiam-bola ny vokatra Apple dia mety tsy dia liana firy, noho ny fifanarahana nifanaovana tamin'i Goldman Sachs | Avy amin'ny mac aho
Ny famatsiam-bola amin'ny vokatra Apple dia mety manana zanabola ambany kokoa, noho ny fifanarahana tamin'i Goldman Sachs
Ny iray amin'ireo tanjon'ny Apple laharam-pahamehana mandritra ireo herinandro voalohany dia ny hijerena ny rafitra ara-bola. Amin'ny ankapobeny, ireo hetsika ireo dia voafetra tamin'ny firafitry ny taratasy fandanjalanjana azy sy ny fomba fandanjana azy io na amin'ny fanararaotana tsara ny politika napetrak'i Trump.
Azo antoka, amin'ny resaka sasany amin'ireo orinasa ara-bola, ny sasany fifanarahana ara-bola ho an'ny mpanjifa izay mividy ny vokatra Apple, na amin'ny fivarotana ara-batana na mivantana amin'ny tranokala Apple. Ny fifanarahana ankehitriny dia mety ho lany andro ary momba ny fifampiraharahana teny tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa mividy mivantana amin'i Apple.
Ary ny zava-misy dia, ankoatry ny fampielezan-kevitra manokana toy ny Krismasy, izay famatsiam-bola 0% ny vokatra, amin'ny tranga hafa dia miakatra 28,24% io vola io. Ny tanjona dia ny handao ny famatsiam-bola amin'ny carte de crédit amin'ny safidy mora kokoa ary ambonin'izany rehetra izany, safidy tsy lafo. Mazava ho azy, ny fividianana vokatra mihoatra ny 1.000 € amin'ny taha ambony 10%, ankehitriny dia taha ambony izany.
Amin'ny maha banky fampiasam-bola an'i Apple azy, Goldman Sachs dia nanangona vola amina miliara dolara ho an'ilay orinasa teknolojia. Ankehitriny Goldman dia te-hividy banky an'ny mpanjifa Apple ihany koa, miaraka amin'ny volavolan-dalàna an-jatony dolara vitsivitsy.
Ny orinasan'ny Wall Street dia eo am-pandinihana mba hanolorana famatsiam-bola ho an'ireo mpividy izay mividy telefaona Apple, famantaranandro ary fitaovana hafa. Ireo mpividy mividy iPhone X $ 1,000 XNUMX $ dia afaka mangataka findramam-bola Goldman fa tsy mametraka izany amin'ny carte de crédit izay matetika mitondra zana-bola be.
Raha ny any Espana, Apple dia manolotra anao mamatsy ara-bola ny vokatra avy aminy miaraka amina andrim-bola fanta-daza, amin'ny 16% APR, afaka mamatsy vola 500 €.
Tsy misy zavatra fantatra momba ny fifanarahana mety hitranga. Safidy maro no dinihina, toy ny: ny tombony azon'i Apple aorian'ny fifanarahana momba ny fampitomboana ny varotra, na ny vidin'ny vokatra ara-bola mandritra ny 24 volana. Ao amin'i Mac avy any Mac aho dia hampahafantarinay anao ny fiovan'ny famatsiam-bola Apple, raha vantany vao mipoitra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny famatsiam-bola amin'ny vokatra Apple dia mety manana zanabola ambany kokoa, noho ny fifanarahana tamin'i Goldman Sachs
Eny tokoa, ho tonga ao amin'ny HomePod ny FullRoom amin'ny fanavaozana manaraka ny rafitrao
WatchOS 4.3 beta 2 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona ankehitriny